Maxaa Cusub ee Xarunta Xogta Cisco - Xarunta Macluumaadka CCNA
Isbedelka Xarunta Macluumaadka Cisco
Xarunta Macluumaadka CCNA
200-150 DCICN: Soo bandhigida shabakada xogta ee Cisco
200-155 DCICT: Soo bandhigida Teknolojiyada Xarunta Macluumaadka Cisco
Xarunta Macluumaadka CCNP
300-175 DCUCI: Hirgelinta Xarunta Macluumaadka Cisco Xarunta Midaysan
300-165 DCII: Hirgelinta Xarunta Macluumaadka Cisco ee Xarunta
300-160 DCID: Qorsheynta Xarunta Macluumaadka Cisco
300-180 DCIT: Dhibaatooyinka Dhibaatada Xarunta Macluumaadka Cisco
Xarunta Xogta Cisco: Casriyeynta farqiga xogta ayaa marwalba horumaraya. Farsamooyinka IT-da ee la shaqeeya qaabka falanqeynta xogta ayaa lagu kalsoon yahay si loo helo habka iyo barashada saxda ah ee awood u siinaya xogta inay ahaato mid u adeegsanaysa IT-ga oo ah aasaaska maamulka farsamada (ITaaS).
Sannadkan, Cisco waxay soo saartay qaar ka mid ah wanaajinta dhabta ah ee ku saabsan sida aad u heli karto damaanad si aad ugu shaqeysid diiradda xogta. Isku-xirka shabakadda wuxuu soo rogayaa horumarin aan fiicneyn oo labadaba baaritaankiisa Xarunta Macluumaadka Cisco Certified Network (CCNA) iyo Cisco Certified Network Professional (CCNP) Imtixaanka Xarunta Macluumaadka ee kala duwan sanadkan, iyo waxa ay tahay fursad ku habboon in la helo taariikhda waxa imika dhacaya, waana in la sii wataa wax aan la sheegin oo ku saabsan dhacdada.
Fursada aanad si wacan u dhageysan, baaritaanka Xarunta xogta CCNA iyo tababarka ee goobta Cisco ayaa la baddalay si loo sameeyo 6.0. Abriil 11, 2017 waxay ahayd maalintii ugu dambeysey ee qaadata 640-911 DCICN v1.0 iyo 640-916 DCICT v1.0.
Magacyada koorasyada iyo maqaar-hoosaadyada ayaa sii waday sidii hore, lakiin mid kasta oo ka mid ah tirooyinka imtixaanka ayaa la cusbooneysiiyay.
200-150 DCICN: Soo bandhigida shabakadda xogta Cisco Network
640-911 DCICN imtixaanka waxaa lagu dhejiyay 200-150 DCICN imtixaanku wuxuu leeyahay fasalo tijaabo ah oo buuxa oo loo baahan yahay in la buuxiyo oo loo hagaajiyo Xarunta Macluumaadka CCNP, Xarunta Macluumaadka CCIE iyo shahaadooyinka kale ee Cisco.
Imtixaankan cusub, Cisco ayaa laga soocay qaybo gaar ah, faa'iidada hoose ee ethernet, iyo dhibcaha Cisco IOS, iyo kuwo kale. Waxaa jira falanqeyn ballaaran oo ku saabsan falanqaynta diiradda fekerka, fikradaha isbedelka sareeya, xogta diirada saaraya fikradaha, iyo Channel Fiber ee ka sarreeya Ethernet (FCoE).
200-155 DCICT: Soo bandhigida Tiknoolajiyada Macluumaadka Cisco
Imtixaanka 640-916 DCICT waxaa lagu falanqeeyay imtixaanka 200-155 DCICT oo wuxuu leeyahay farsamooyin degenaansho ah oo buuxiya munaasabadda loogu talagalay laguna hagaajinayo Xarunta Macluumaadka CCNP, Xarunta Macluumaadka CCIE iyo shahaadooyinka kale ee Cisco.
Imtixaankan cusub, Cisco ayaa laga daadgureeyey mawduucyada aasaasiga ah ee aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin SAN, qaababka habka qaabeynta nidaamka, iyo maamulada shabakadaha, qodobada kale. Waxaa jira falanqeyn ballaaran oo ku saabsan qaabaynta shakiga iyo shabakada, wax-qabadka daruuriga ah, kumbuyuutarka iyo habeynta qaab-dhismeedka falanqaynta xogta, iyo Xarunta Caawinta Qaybta (ACI).
Xarumaha xogta xogta CCNP iyo tababarka Cisco ayaa baddashay Janaayo 17, 2017. Laga soo bilaabo Juun 3, 2017, waxaad qaadan kartaa imtixaanada v5 ama imtixaanada cusub ee v6, oo ku xiran hadafyadaada shakhsi ahaaneed.
Magacyada koorsooyinka, gaabinta, iyo tirooyinka imtixaanka ayaa isbedelay si ay u sii fiicnaadaan qaybaha shaqada ee dheeraadka ah iyo hawlaha looga baahan yahay shaqooyinka sida caadiga ah haysta macluumaadka diiradda saara khubarada IT.
Imtixaanka 642-999 DCUCI waxaa lagu dhejin doonaa 300-175 DCUCI imtixaan oo wuxuu leeyahay fasalo meel imtixaan ah oo buuxiya sida muhiim u ah oo loo habeynayo Xarunta Macluumaadka Cisco CCNP, Xarunta Macluumaadka CCIE, iyo aqoonsiyada kale ee Cisco.
Imtixaankan cusub, Cisco wuxuu shaaciyey shay khaas ah oo loogu talagalay macluumaadka gaarka ah ee B-Series iyo C-Series UCS Server iyo UCS Server Virtualization Challenges, taas oo ay ku dhejineyso meel imtixaan oo weyn oo ah "Bixinta Isdhexgalka Maareynta Maareynta." Waxaa jira xoojin ballaaran oo ku saabsan robotization, macluumaadka ammaanka, iyo xogta diirada saara shabakada, oo ay ku jiraan FCoE.
Imtixaanka 642-997 DCUFI waxaa lagu dhejin doonaa imtixaanka 300-165 DCl oo wuxuu leeyahay fasallo meeleyn ah oo dib-u-cusbooneysiin ah oo buuxiya si muhiim ah oo loogu habeeyo Xarunta Macluumaadka Cisco CCNP, Xarunta Macluumaadka CCIE, iyo aqoonsiyada kale ee Cisco.
Imtixaankan cusub, Cisco waxa laga saaray shay khaas ah Cisco Nexus iyo Cisco NX-OS Software iyo diiradda hoos u dhac ku yimaada qaabaynta shabakadda. Waxaa jira falanqeyn ballaaran oo ku saabsan horumarinta cusub, VXLAM, habaynta, iyo mawduuc ballaaran oo mawduucyo badan oo ku saabsan xogta muhiimka ah ee xogta.
300-170 DCVAI: Hirgelinta Xarunta Macluumaadka Cisco ee Xarunta Xogta iyo Awooda
Imtixaanka 300-170 DCVAI waa mid cusub oo tijaabiya qaababka waxqabad ee macquul ah si loola socodsiiyo hawlaha falanqeynta xogta iyo dhisida habdhaqameedka habka lagu fuliyo ee iskudhafka ah oo ku saabsan midaasta macluumaadka muuqaalka jirka iyo fiilada. Qeybaha imtixaannada cusub ee imtixaanka cusub waxay buuxinayaan sidii ay muhiim u yihiin oo ay u habeyn lahaayeen Xarunta Macluumaadka Cisco CCNP, Xarunta Macluumaadka CCIE, iyo aqoonsiyada kale ee Cisco.
Imtixaankan, waxaa jira fiiro gaar ah oo ku saabsan fulinta aasaaska kombuyuutarka aasaasiga ah, Kaabayaasha Maareynta Dhibcaha, Hantida Shabakada Codsiyada Qeybta Codsiga, iyo Maareynta Kaabayaasha Maareynta Meelaynta iyo kormeerka.
300-160 DCID: Naqshadaynta Cisco Xarunta Macluumaadka Dhaqanka
The 642-998 DCUCD iyo 642-996 DCUFD imtixaannada ayaa lagu dhejin doonaa 300-160 DCID imtixaan kaas oo qaboojiyey fasalo goob imtixaan oo buuxsan sida muhiim u ah iyo la qabsashada Cisco Xarunta Xogta CCNP, Xarunta Macluumaadka CCIE, iyo kuwa kale Caddaynta Cisco.
Imtixaankan cusub, Fikradaha Cisco, qorshaha falanqeynta xogta, maadooyinka baaritaanka, iyo tusmada ammaanka. Fikradaha Xog-u-fiirinta waxa ay isku xiraan qaab-dhismeedka dheelitiranka oo ay isku-keeneen miisaaniyadii qorshe-qorsheed ayaa lagu biiray hal imtixaan, oo la dhajiyay qaabab isku-dhafan oo la filayo oo ka filaya xogta farsamada IT.
The 642-998 DCUCD imtixaanka iyo 642-996 DCUFD imtixaanka ayaa lagu dhejin doonaa 300-180 DCIT imtixaankuna wuxuu leeyahay fasalo imtixaan oo farsameyn ah oo buuxiya munaasabadda loogu talagalay lana hagaajiyo Xarunta Macluumaadka Cisco CCNP, Xarunta Macluumaadka CCIE, iyo aqoonsiyada kale ee Cisco.
Imtixaankan cusub, Cisco waxa laga saaray shayada gaarka ah ee loogu talagalay macluumaadka B-Series iyo C-Serisi UCS, taasoo awood u siinaysa walxaha joogtada ah in lagu soo ururiyo hal goob, "Baarida Xarunta Macluumaadka Xisaabaadka." Waxaa jira falanqeyn ballaaran oo lagu baarayo qawaaniinta dirista, casriyeynta isbedelka wacyigelinta, Xarunta Caawinta Dhibcaha (ACI) iyo xogta waxay diiradda saaraan ammaanka LAN iyo SAN, iyo habsocodsiinta amniga.
Si laguu hagaajiyo horukaca isbeddelada soo socda iyo soo socota, Cisco waxay dhistay Xarunta Qalabka Dhibcaha Xarunta Xogta Dhibcaha ee CCNP oo aad isticmaali karto si aad u fahamto imtixaannada aad u baahan tahay inaad qaadato xiga.
Imtixaannadan ayaa kobcaya si ay kuugu siiyaan tababarka ugu dambeeyay ee qorsheynta iyo ka shaqeynta xogta ugu muhiimsan xogta muhiimka ah iyo habka cusub, oo ay ku jiraan isku xirka; server, shabakad, iyo karti-galinta karti-galinta; keydinta fikradaha iyo hababka; isku xidhka wada shaqaynta; iyo istratijiyadda istiraatiijiga ah, oo dhan si joogto ah.
Shahaadada Nabadgelyada CCNA - Tilmaamaha Dhameystiran
5 waxyaabaha aad ka warqabto Cisco CCNA Certification